आज छठपर्व : लगानी, धनप्राप्ति, सफलता, यात्रा, स्वास्थ्यका लागि तपाईको दिन कस्तो छ ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
आज छठपर्व : लगानी, धनप्राप्ति, सफलता, यात्रा, स्वास्थ्यका लागि तपाईको दिन कस्तो छ ?
वि.सं. २०७७ साल, मङ्सिर महिना, ०५ गते, शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल (कछलाथ्व) षष्ठी, उत्तराषाढा नक्षत्र, मकर राशिको चन्द्रमा, गण्ड योग, कौलव र तैतिल करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, आज : छठ पर्वअन्तर्गत मुख्य दिन - छठ पर्व, डाला पूजा, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक (शिववास जुरेको, रुद्री/पूजा गर्न मिल्ने दिन), शिलान्यास (सामान्य), डेरा सर्ने, भोलि : छठ पर्वअन्तर्गत अन्तिम दिन, बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठपर्वको समापन, द्विपुष्कर योग दिनको ०२.५० बजेदेखि मध्यरात्रीपछि ०१.५७ बजेसम्म, भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक (शिववास जुरेको, रुद्री/पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास९सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र ।
नोकरी र व्यवसायका क्षेत्रमा देखापर्ने समस्यामा केन्द्रित हुनाले दिन बितेको पत्तो पाइने छैन । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको कारोबार गर्दा ढिलो लाभ मिल्ने सम्भावना छ । व्यापार व्यवसायमा समय नदिनाले हानी हुनसक्छ । सचेत हुनुहोला । अभिभावकको समस्यामा रुमल्लिने दिन छ । प्रतिष्ठा गुम्ने सम्भावना छ । शत्रुको चलखेल बढ्नसक्ने भएकाले सचेत हुनुहोला । आफूले मेहनत गरे पनि त्यसको प्रतिफल अर्कैले लिने सम्भावना छ । अभिभावकसँग सम्बन्ध चिसिन सक्छ ।
समुदायको हितमा काम गर्ने समय छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । किर्तिमानी काम शुरु गर्ने समय छ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । प्रतिष्ठित काम गरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भइनेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरुसँग मित्रता बढ्नेछ । आश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । भाग्यले नचिताएको फाइदा दिलाउन सक्छ । चुनौतीहरु स्वतः हट्नेछन् । दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
शरीरमा आलस्य, रिसराग र भ्रमले डेरा जमाउने दिन छ । आजको दिन मेसिन, कलपुर्जा, सवारी साधन र हतियार चलाउदा होस पुर्याउनुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या देखिनसक्छ । बेकारको विवादमा फस्न सकिन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिगत उल्टो देखिनेछ । बोलिमा नियन्त्रण गर्नुहोला । कुने नयाँ काम थालनी गर्दा शुभफल पाउन सकिदैन । प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुने दिन हो । व्यापारीहरुले हानी व्यहोर्नुपर्दछ र कर्मचारीले अपजस व्यहोर्नुपर्ला । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा जस पाइदैन ।
भावनाप्रदान दिन हो । आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर रमाउने दिन हो । घरपरिवारमा हर्षको वातावरण हुनेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । आनन्द र रमणीयताका लागि समय र धन खर्च हुनसक्छ । घुमघाम, भ्रमण र पर्यटनको लागि अनुकूल समय छ । हाँसखेल र मनोरञ्जनको समय छ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। व्यवसायिक यात्राको सम्भावना छ । साथीभाइको सहयोग जुट्नाले उत्साह मिल्नेछ। दिगो काम थाल्ने समय छ।
बहस र वादविवादमा संलग्न हुने समय चल्दैन । कार्यक्षेत्रमा अरुले गरेभनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले आटेको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। चुनौति र अप्ठ्यारा हटाउन आज गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । विशेष ठाउँमा तपाईको निर्णयको कदर हुनेछ । विचलित नभई काम गरेमा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ।
विचारको कदर हुनेछ । ताकेको काम बन्नेछन् । सिर्जनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । प्राज्ञिक र बौद्धिक तथा दार्शनिक गतिविधिमा सफलता मिल्नेछ । चिताएको काम बन्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक काम गर्दै नाम, दाम र इनाम हातपार्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ।
धैर्यले काम लिने समय छ । पारिवारिक रमझममा समय व्यतित हुनेछ । वैदेशिक रोजगारी गर्ने वा परदेशमा हुनेहरुले घरायासी कुरा सम्झेर दिन बिताउनेछन् । चुनौतिको बावजुद नसोचेको काम बन्नसक्छ । व्यापार व्यवसाय राम्रो छ । आकस्मिक रुपमा धनप्राप्तिको सम्भावना छ । नचिताएको साथी वा छिमेकीले अप्रत्यासित सहयोग गर्ने संकेत छ । परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन्। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
व्यवहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने समय छ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयप्रति आकर्षित भइनेछ । विगतमा भएका राम्रो कामको स्मरण हुनेछ । भाइबहिनीको कामले हर्षित बनाउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ । उद्योग र व्यापारबाट विशेष फाइदाको योग छ । सहयोगीहरुले साथ दिनेछन् । प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ । परिश्रम र पराक्रम गरेरबमोजिम समाजमा सम्मान र साख बढाउन सकिने समय छ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ ।
मीठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूलता आएको छ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लाग्ने समय छ । यद्यपि आयका मार्गमा देखिएका अप्ठ्यारा र चुनौतीले चिन्तित तुल्याउन सक्छ । कार्यक्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य फाइदा हुने समय छ । अन्य कामबाट पनि केही न केही लाभ हुने समय छ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ । बोलीको भरमा काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । परिश्रम गरेबमोजिम कामको समुचित मूल्यांकन हुने समय छ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ ।
मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्नसक्छ । नियमित तथा दैनिक काम र व्यवसायबाट फाइदा हुनेछ । गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउनेछ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ । आजको प्रयास र कामधन्दाबाट दिर्घकालिन फाइदा पुग्नसक्छ । आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रुप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ । नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनसक्छ । नौलो र रमणीय स्थानको यात्रा पनि हुनसक्छ ।
जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । आलस्य त्यागेर उत्साहपूर्वक काम गर्ने दिन हो । खर्च बृद्धि हुने समय छ तर समुति स्थानमा धनव्यय हुनेछ । सुखी जीवन व्यतित गर्न मन लालायित हुनेछ । रामरमाइलो तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा धनलगानी हुनसक्छ । अभिभावकको इच्छाबमोजिम धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण हुने सम्भावना पनि छ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य छ । श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा भने सोचेअनुसार लाभ हुनेछैन । धनसङ्ग्रह क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुनेछैन ।
कर्मसिद्धीको समय आएको छ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय आएको छ । कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवासयमा सामान्यतया लाभ नै हुने दिन हो । तर काम गर्ने वातावरण नहुँदा सोचमग्न बन्नसक्नुहुन्छ । यद्यपि आज आँटेका ताकेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन होला । शरीरमा उत्साह र उमंग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल हुनेछ । काममा पनि पाmइदाको योग छ । श्रममूलक काम वा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरुले राम्रै लाभ लिन सक्नेछन् । ठूलाबडाको सहयोगले रोकिएको काम बन्नेछ ।
मिस यूनिभर्स नेपालमा उत्कृष्ट १४ छनौटका लागि भोटिङ्ग
आफूलाई कमजोर सम्झनु सबैभन्दा ठूलो पाप हो – पढ्नुस् दार्शनिक स्वामी विवेकानन्दका १० प्ररेक प्रसङ्ग
आज कुन राशी हुनेको दिन कति शुभ, कति अशुभ ? हेर्नुस्
गायिका मिलन नेवार र सुनिल मास्केको संगीतमा ‘जानी नजानी’ सार्वजनिक